အလေးအပငျမတော့မယျဆို သတိထားရမဲ့အခကျြတှေ - OnDoctor
By Kaung Htet Naing	 On Jan 10, 2019 Last updated Jan 10, 2019
လူတော်တော်များများဟာ အလေးအပင်တွေ ရုတ်တရက် ‘မ’လိုက်ပြီးရင် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဒဏ်ဖြစ်ကျန်ခဲ့တတ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ခါးနာသွားတယ်၊ ခါးမျက်သွားတယ်လို့ ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။ အမှန်က ဒါဟာ ‘မ’တဲ့နည်းမမှန်လို့ဖြစ်တာပါ။ တကယ်က ‘မ’ချင်တဲ့ ပစ္စည်းကို မ ပါ။ ‘မ’နည်း မှန်ရင် မနာပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ အလေးမကစားသမားတွေဟာ ပုံမှန်ထက်အများကြီးလေးတဲ့ ၀ိတ်ပြားတွေကိုတောင် ခါးမနာဘဲ ရအောင် ‘မ’နိုင်ကြတာပါ။
အဲဒီတော့ မှန်ကန်စွာ အလေးမတတ်အောင် အလေ့အကျင့်ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ လူအများစုကတော့ သိလို့ဖြစ်စေ၊ အလိုအလျောက်ပြုမူတတ်လို့ဖြစ်စေ ခါးမနာအောင် အနေအထားမှန်မှန်နဲ့ ‘မ’တတ်ကြပါတယ်။ ပုံ မှာ ပြထားတာကို ကြည့်ကြည့်ပါ။
ပုံ (၁) ပုံ (၂)
ပုံ (၁) ကလို ကိုယ်သယ်မမယ့် အရာဝတ္ထုကို စတင် လှမ်းယူကတည်းက ခါးကို ကုန်းပြီး ယူမယ်ဆိုရင် မှားနေပါပြီ ။ ပုံ (၂) လို အဲသည်အရာနဲ့ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကို တတ်နိုင်သမျှ နီးကပ်အောင် နေပြီး ခါးကို တည့်မတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ ‘မ’မှသာ မှန်ပါတယ်။ ဒါက ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းက ရူပဗေဒသဘောတရား (Biomechanics) တွေကို အသုံးချပြီး သက်တောင့်သက်သာနဲ့ စမတ်ကျကျ ‘မ’လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခေါ်အဝေါ်အသုံးအနှုန်းတွေ နဲ့ ရှင်းပြရရင်တော့ ရှုပ်ထွေးပါတယ်။ ကိုယ့်ခါးရိုးနဲ့ အရာဝတ္ထုကြားက အကွာအဝေး (moment arm)ကို ကျုံ့လိုက်တော့ အလေးအပင်ရဲ့သက်ရောက်အား (torque) က နည်းသွားတဲ့သဘောပါ။ သဘောတရားကို ဥပမာနဲ့ပြောပြရင်တော့ နားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဆိုကြပါစို့ တံခါးတခုကို တွန်းဖွင့်မယ်ဆိုရင် တံခါးပတ္တာအနားကပ်ပြီး သွားတွန်းရင် ပွင့်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ တံခါးပတ္တာနဲ့ဝေးတဲ့ လက်ကိုင်နေရာကနေ တွန်းဖွင့်ရင် လွယ်လွယ်ကူကူ ပွင့်ပါတယ်။ ပြောချင်တာက လည်ချက်ဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့ အားသက်ရောက်တဲ့နေရာကြားက အကွာအဝေးကြီးလေလေ အားသက်ရောက်မှုက များလေလေဖြစ်ပါတယ်။ အလေးမတဲ့ နေရာမှာလည်း ခန္ဓာကိုယ်လည်ချက်နဲ့ အရာဝတ္ထုကြားက အကွာအဝေးများလေလေ ခါးအပေါ်သက်ရောက်တဲ့အလေးဒဏ်က ပိုများများလေလေပါပဲ။ ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခါးရိုးအနေအထားကလည်း ပုံမှန်အားဖြင့် အနောက်ကို အနည်းငယ်လန်နေရပါတယ် (ပုံ ၃ မှာ ပြထားပါတယ်)။
ရှေ့ကို ကုန်းနေရင် အဲဒါ ပုံစံမမှန်ဘဲ ခါးအရွတ်တို့ ခါးအာရုံကြောတို့ ဒဏ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ အလေးအပင်မရင် ‘မ’ မယ့်အရာနဲ့အနီးကပ် ပြီးတော့ ခါးကိုဆန့်ပြီး’မ’သင့်ပါတယ်။ အရာဝတ္ထုမှ မဟုတ်ပါဘူး လူတယောက်ကို တွဲထူမယ်၊ ‘မ’ မယ်ဆိုရင်လည်း အဲသည်လူနဲ့ ကိုယ်ချင်းကပ်ပြီး မြဲမြဲမြံမြံ တွဲပြီးမှ ‘မ’ ယူဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့မှသာ နှစ်ဦးစလုံးအဆင်ပြေပြေ ရွေ့လျားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံး သက်သက်သာသာ နဲ့ အဆင်ပြေပြေ များများ ‘မ’ နိုင်ကြပါစေ။
Ref; Brunstromm’s Clinical Kinesiology 6th edition.
Science Learning Hub, University of Waikato (2013).
လူတျောတျောမြားမြားဟာ အလေးအပငျတှေ ရုတျတရကျ ‘မ’လိုကျပွီးရငျ ခန်ဓာကိုယျမှာ ဒဏျဖွဈကနျြခဲ့တတျပါတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ ခါးနာသှားတယျ၊ ခါးမကျြသှားတယျလို့ ပွောလရှေိ့ကွပါတယျ။ အမှနျက ဒါဟာ ‘မ’တဲ့နညျးမမှနျလို့ဖွဈတာပါ။ တကယျက ‘မ’ခငျြတဲ့ ပစ်စညျးကို မ ပါ။ ‘မ’နညျး မှနျရငျ မနာပါဘူး။ ဒါကွောငျ့မို့ အလေးမကစားသမားတှဟော ပုံမှနျထကျအမြားကွီးလေးတဲ့ ဝိတျပွားတှကေိုတောငျ ခါးမနာဘဲ ရအောငျ ‘မ’ နိုငျကွတာပါ။
အဲဒီတော့ မှနျကနျစှာ အလေးမတတျအောငျ အလအေ့ကငျြ့ပွုလုပျသငျ့ပါတယျ။ လူအမြားစုကတော့ သိလို့ဖွဈစေ၊ အလိုအလြောကျပွုမူတတျလို့ဖွဈစေ ခါးမနာအောငျ အနအေထားမှနျမှနျနဲ့ ‘မ’တတျကွပါတယျ။ ပုံ မှာ ပွထားတာကို ကွညျ့ကွညျ့ပါ။
ပုံ (၁) ပုံ (၂)
ပုံ (၁) ကလို ကိုယျသယျမမယျ့ အရာဝတ်ထုကို စတငျ လှမျးယူကတညျးက ခါးကို ကုနျးပွီး ယူမယျဆိုရငျ မှားနပေါပွီ ။ ပုံ (၂) လို အဲသညျအရာနဲ့ ကိုယျ့ခန်ဓာကိုယျနဲ့ကို တတျနိုငျသမြှ နီးကပျအောငျ နပွေီး ခါးကို တညျ့မတျတဲ့ပုံစံနဲ့ ‘မ’မှသာ မှနျပါတယျ။ ဒါက ခန်ဓာကိုယျအတှငျးက ရူပဗဒေသဘောတရား (Biomechanics) တှကေို အသုံးခပြွီး သကျတောငျ့သကျသာနဲ့ စမတျကကြ ‘မ’လိုကျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အချေါအဝျေါအသုံးအနှုနျးတှေ နဲ့ ရှငျးပွရရငျတော့ ရှုပျထှေးပါတယျ။ ကိုယျ့ခါးရိုးနဲ့ အရာဝတ်ထုကွားက အကှာအဝေး (moment arm)ကို ကြုံ့လိုကျတော့ အလေးအပငျရဲ့သကျရောကျအား (torque) က နညျးသှားတဲ့သဘောပါ။ သဘောတရားကို ဥပမာနဲ့ပွောပွရငျတော့ နားလညျနိုငျပါလိမျ့မယျ။ ဆိုကွပါစို့ တံခါးတခုကို တှနျးဖှငျ့မယျဆိုရငျ တံခါးပတ်တာအနားကပျပွီး သှားတှနျးရငျ ပှငျ့ဖို့မလှယျပါဘူး။ တံခါးပတ်တာနဲ့ဝေးတဲ့ လကျကိုငျနရောကနေ တှနျးဖှငျ့ရငျ လှယျလှယျကူကူ ပှငျ့ပါတယျ။ ပွောခငျြတာက လညျခကျြဖွဈတဲ့နရောနဲ့ အားသကျရောကျတဲ့နရောကွားက အကှာအဝေးကွီးလလေေ အားသကျရောကျမှုက မြားလလေဖွေဈပါတယျ။ အလေးမတဲ့ နရောမှာလညျး ခန်ဓာကိုယျလညျခကျြနဲ့ အရာဝတ်ထုကွားက အကှာအဝေးမြားလလေေ ခါးအပျေါသကျရောကျတဲ့အလေးဒဏျက ပိုမြားမြားလလေပေါပဲ။ ဒါ့အပွငျ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ခါးရိုးအနအေထားကလညျး ပုံမှနျအားဖွငျ့ အနောကျကို အနညျးငယျလနျနရေပါတယျ (ပုံ ၃ မှာ ပွထားပါတယျ)။
ရှကေို့ ကုနျးနရေငျ အဲဒါ ပုံစံမမှနျဘဲ ခါးအရှတျတို့ ခါးအာရုံကွောတို့ ဒဏျဖွဈတတျပါတယျ။ဒါကွောငျ့မို့ အလေးအပငျမရငျ ‘မ’ မယျ့အရာနဲ့အနီးကပျ ပွီးတော့ ခါးကိုဆနျ့ပွီး’မ’သငျ့ပါတယျ။ အရာဝတ်ထုမှ မဟုတျပါဘူး လူတယောကျကို တှဲထူမယျ၊ ‘မ’ မယျဆိုရငျလညျး အဲသညျလူနဲ့ ကိုယျခငျြးကပျပွီး မွဲမွဲမွံမွံ တှဲပွီးမှ ‘မ’ ယူဖို့လိုပါလိမျ့မယျ။ အဲဒီတော့မှသာ နှဈဦးစလုံးအဆငျပွပွေေ ရှလြေ့ားနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ အားလုံး သကျသကျသာသာ နဲ့ အဆငျပွပွေေ မြားမြား ‘မ’ နိုငျကွပါစေ။
How to lift heavy objectsဒေါက်တာထွန်းလင်း